China Caravan inofambisa bhatiri LAXpower-1230 12V 30Ah LiFePO4 bhatiri pack ine yakavakirwa-mukati mundiro uye SOC Mugadziri uye Mutengesi | LIAO
1. Iyo ABS casing 12V 30Ah LiFePO4 bhatiri kurongedza kwekaravhani yekufambisa.
2. Yakanyanya simba uye ultra light uremu.
Muenzaniso Nha. LAXpower-1230
Chezita chinzvimbo 30Ah
Max. kuenderera zvazvino 100A
Chinguvana chazvino 200A
Peak yazvino 300A
Max. kuchaja ikozvino 2C
Kutengesa magetsi 14.6V
Kutengesa ikozvino 4A
AC yekuisa 100-240V
Kuchengetedza tembiricha -10 ° C ~ 45 ° C
Kutenderera hupenyu (80% DOD) ＞2000 nguva
IP kirasi IP21
Divi 150mm * 275mm * 120mm
Kushanda Caravan inofamba, magetsi.
3.Kushandisa kwenguva refu uye kuchengetedzeka kukuru.
4. Yakavakwa-mukati charger uye yakaderera yega-dischareg mwero.
5. Hupenyu hwakareba hwehupenyu nad hunoshamisa kuita.
6. Yakakosha yakagadzirirwa karavhani kufamba.
7. Ichi chigadzirwa chinonyanya kufarirwa mumusika weEU kwemakore.
Parameter uye Kushanda
Hangzhou LIAO inyanzvi yekugadzira prismatic LiFePO4Lithium masero. Bhatiri mapakeji akaunganidzwa achishandisa aya maseru. Muviri wakareruka wakasarudzirwa iyo LAXpower-1230 uko masero, charger uye manejimendi manejimendi akaisirwa muchigadzirwa chimwe chete.
Chinangwa cheiri bhatiri risingaremi ndiko kupa mhinduro yakasununguka kune mushandisi wekaravhani yekufambisa ine mutoro wakaganhurirwa we30 Ah uye ine huremu hwakaganhurirwa. Iri bhatiri rinokwanisa kuendesa yakakwira mafashama, kurema uremu uye nekudaro rakanyatsokodzera pachinangwa ichi.
Iyo bhatiri ine inopfuura yakaringana kuchaja kuti uite imwe yekufamba chiito checaravan. Anofambisa anogona kushandiswa kusvika pamaminitsi makumi mashanu panguva yekushandisa zvakanyanya (35 Kuenderera). Mukushandisa kwakanyanyisa (100 A) uyo anofambisa anogona kushandiswa kweanosvika maminetsi gumi nesere.
Kana yaitwa kwenguva yakareba bhatiri rinobva radzima roga uye rinofanira kuzvimisikidza roga. Nekuti bhatiri rakagadzirwa kubva kuLithium LiFePO4kemesitiri, zvinokwanisika kuburitsa zvizere bhatiri kusiyana ne lead acid mabhatiri. Kana bhatiri rangove risina chinhu rinozvidzima roga uye rinobva roda kuchinjirwa rechimwe chinotevera. Kubhadharisa kunoitika kuburikidza nechaja tambo kune mains kubatana.
Pashure: SOC uye mubato zvaisanganisira 36V 40Ah LiFePO4 bhatiri pack yemagetsi sikuta / mudhudhudhu / bhamba mota
Zvadaro: Yakakwira simba yakanakisa kudonhedza kuita 12V 130Ah LiFePO4 bhatiri pack yemota yemota uye karavhani
Yakavakirwa-mundiro Mwenje uremu hukuru simba 12V 12Ah LiFePO4 bhatiri pack yecaravan mover
Yakakwira simba yakanakisa kudonhedza kuita 12V 130Ah LiFePO4 bhatiri pack yemota yemota uye karavhani